Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Akwụsịla! Ndị mba ọzọ na -ezo ma na -arinụ mmanya na Thailand
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Pattaya Pol. Col. Chitdecha Songhong, onye nlekọta nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii Nongprue, duru otu ndị ọrụ mmanye iwu na mwakpo abalị nke ụlọ mmanya abalị abalị ole na ole gara aga na Julaị 26, 2021.
A hụrụ mmadụ iri na otu ndị mba ọzọ na otu onye Thai n'ime ụlọ okpuru ulo na -a drinkingụ ihe ọholicụholicụ na -aba n'anya.
E jidere onye ọ bụla ma boo ya ebubo na ọ dara iwu mberede.
Ugbu a, Thailand nọ n'okpuru iwu mmechi nke gụnyere mgbochi megide nnọkọ ọha na ire na ị orụ mmanya.
Ihe ha hụrụ bụ mkpokọta nke ndị mba ọzọ 11 na otu onye Thai na -a alcoụ ihe ọholicụholicụ na -aba n'anya n'ime ime ụlọ mmanya. Ejidere ha ma boo ha ebubo na ha mebiri Iwu Mberede na inupụrụ iwu nke mmachi Mgbochi Ọrịa Chonburi megide nnọkọ ọha na ire na ịre mmanya.
Ndị bi na Soi Wat Boon Samphan dọtara ndị uwe ojii Pattaya na otu ụlọ mmanya dị na mpaghara ahụ na -enwe oriri mmanya mgbe niile na ogige ahụ, nke ha maara na -emegide iwu mkpọchi nke Ngalaba Nchịkwa Ọrịa Chonburi tiri.
N'akụkọ mmanya ndị ọzọ, vidiyo nke pụtakwara ụbọchị abụọ gara aga, na-egosi ama ama Pattaya "Ogwe Aki" akwagala Soi Buakhao. Vidiyo ahụ na-egosi ụmụ nwanyị yi uwe mara mma na ndị okenye Pattaya na-eme njem ọnụ na-enweghị nkpuchi ka ha na-a dụ mmanya. Otu onye na -anya ọgba tum tum na mpaghara ahụ gosipụtara na ụmụ nwanyị a na -enyo enyo na ha bụ ndị akwụna na -anọ ebe ahụ kwa abalị.
Nkwupụta ihe egwu CDC ọhụrụ na COVID Shot nke atọ
Ọdụ ụgbọ mmiri na-eme njem na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ na-aga ...
Bank of China kwupụtara na azụmahịa crypto niile megidere iwu ...
Atụmatụ okporo ụzọ ọdụ ụgbọ elu Fraport kacha ọhụrụ maka Septemba ...